MUUQAAL: DF Somalia oo Jawaab adag ka bixisay Ciidanka la sheegay inay dagaalameen Gobolka Tigreega | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: DF Somalia oo Jawaab adag ka bixisay Ciidanka la sheegay inay dagaalameen Gobolka Tigreega
Muqdisho ( Kalshaale ) Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska, xukuumadda Soomaaliya, mudane Cismaan Abokor Dubbe, oo maanta shir jaraaâ€™id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa beeniyay warbixinta baaraha guddiga xuquuqul insaanka Qaramada Midoobey oo dhowaan soo saaray taas oo lagu sheegay in ciidan Soomaaliyeed oo tababar ku qaadanaya dalka Eritrea ay ka qeybgaleen dagaalka gobolka Tigraay ee Ethiopia.
Waxaa uu sheegay in warbixinta Qaramada Midoobay aysan heysan wax daliil ah uu tusaya waxa ay sheegayaan, isaga oo intaas ku daray in siyaasiyiin dano gaar ah ka raadinaya ay arrintaas buun buuniyaan.
â€œWaa wax kama jiraan, Ma jiro ciidan Somaliyed oo Tigreey ka dagaalamay. Dhalinyaradeena waxey wali Eritrea noogu maqan yihiin Tababar mana jiro qof ka dhintey iyagoo caafimaad qaba ayay dib ugu soo laaban doonaan dalkooda marka ay tababarka dhamaystaanâ€�ayuu yidhi Wasiir Dubbe.
Wasiir Dubbe, waxaa uu tilmaamay in ciidanka Soomaaliyeed ee lagu tababarayo dalka Eritrea uusan ka qeybgalin dagaalka Itoobiya isla markaana aaney jirin baahi arrintaas loo qabo.
Mudane Cismaan Abokor Dubbe, waxaa uu sheegay in siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa mucaaradka ah ee maalin kasta ka hadla arrinta ciidanka Eritrea jooga aysan marna soo hadal qaadin dhibaatada Kenya ay ku heyso dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolada Jubbooyinka.
â€œKama hadlaan siyaasiyiinta Xadgudubyada Kenya ay dalka ku hayso,carruurta dhimanayso oo ay duqeynta ku dileyso,balse waxay ajande ka dhigteen askar tababar ku maqanâ€�ayuu sii raaciyay Wasiir Dubbe.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=44803
22 Comments for “MUUQAAL: DF Somalia oo Jawaab adag ka bixisay Ciidanka la sheegay inay dagaalameen Gobolka Tigreega”
June 10, 2021 - 3:00 pm
DUBBE BURIS BAA YEERAY
sxb Dubbe adigu waqtigaas waxaad joogtay BURCO BUSWAYN,
Caruurta Soomaaliyeed waxaa Eritrea laga iibiyay
intaadan u soo shaqo tagin GOOF HIRAAB.
Waa Yuusuf Garaad oo inta iska dhiibo HARGEYSA
yiraahdo waxaan ka hadli JABHADDII GENERAL CAARRE.
* Dubbe dhilqaday (baxsaday) marbuu daqaro geystaaye
June 10, 2021 - 3:06 pm
– Habar-Jeclo – hadalka
– Habar Awal – Ganacsiga
– Habar Yoonis- Dagaalka
– Ciidagale – Maqaaxiyaha
– Arabna – Iska Tiiri Habraha
June 10, 2021 - 3:10 pm
Oo Macangag Warlord Child KILLER
Muu ka hadlo arinta Kenya, ileen hadda shaqo mahayo
Mise Maamo Seynab ayuu Cake la Dubi
Allow hadalka ha nagu celin
War iska jajabso kalmadaha koley Carabkaad ruugi
Markuu kugu KACO Depression
June 10, 2021 - 4:22 pm
Dabshid- Horaa loo yidhi Hawiye; Odayna malaha, Aqoon yahana malaha, Abaala malaha.
Reeraha Isaaqa iyo Mareexaanka ee aad 24/7 Caydaa Walhi- labadaa reerba kaa ka Gobsan oo ka sharaf badan Hawiye.
Isaaq iyo Mareexaan Labaduba ka aqoon badan Hawiye , oo ka Asluub wacan, oo ILLAAHAY uga dhow, oo ka Dawlad yaqaansan Hawiye.
Cida Hawiye- taageerta ama caawisa -aakhirka Hawiyaa Dila
June 10, 2021 - 4:36 pm
Waalidku ma hooyMooryaaneetka Muqdisho oo kaliya ayay joogaa?
Waxaan arkayay Dumar sheeganaya walidiintii Ciudanka Casmara ku maqan oo Muqdisho ka biqlanaya.Meel kale maaxa looga banaan bixiwasysy?
Ciidanka,waxaa soo xulay xildhibaano.Hadii run la sheegayo waalidku ha u tago xildhibaankiisa.
Saa waalidka iyo dawladu ismaba arag,isma yaqaanaan.
Wiilka Ciidanka loo qaaday waxaaa keenay Xildhibaan ama masuul kale oo Beesha ka soo jeeda.
Dee walidku wuu yaqaan qofkii wiilkiisa ka soo qaaday degaankiisa ilaa u soo galay gacanta dawlada.
Aniga oo ixtiraamaya waalidka,hadana waxaan isleehay,naxaa muqdisho oo kaliya ku koobay qaylada,maadaamaa Ciidanku ka kala yimid meelo kala duwan?
Waa nagaalo Mooryaaneed Diimo badan kk.
June 10, 2021 - 5:15 pm
Waar mikrafoonkii Armaajo miyuu soo laabtay! Waxaan is lahaa
Markuu 4ta jeeb buuxsaday ayuu baxsadee? Kkk Hadaad rabto inaad been sawir ka qaadato Dube daawo. Waa beentii oo kabo, shaadh iyo surwaal loo geshay/xidhayðŸ¤‘ðŸ¤‘ðŸ¤‘ðŸ¤‘ðŸ¤‘ðŸ˜�ðŸ˜�
June 10, 2021 - 5:42 pm
Warka Dubbe ma cadda. Tababar bay jiraan hadal maanka geli kara maaha. Laba daraadle, 2 sannad bay maqan yihiin oo tababar jiraan baa ka sii daran.
Ciidan laba sana tababar jiraa muxuu ahaa?
Ma ciyaal buu la hadlahayaa
Waxaad qoraal hore ku tilmaantay rag aan ku jiro inaan caabudno sannamka qabyaaladda? Waxaa hadalkaada ka muuqda jaahilnimo iyo deg deg is biirsaday.
Haddaad nusuusta sharciga garan lahayd kuma dhiirrateen hadalkaasi gaalaysiinta ah.
Diinta baro deetana baro sida dadka miisaan sax ah loo saaro.
Dhaxaan arknay kuwa fatwada jeebka ku sita oo weel madhan ah
June 10, 2021 - 7:04 pm
Geed,wuxu leeyahay socodkii,Mr.Kaaahin kkk
Amaaantii Somalijecel ee doorashada Somaliland ayaa dhashay caydaa ku dhacday Dabshid.
June 10, 2021 - 7:35 pm
Oo kaalay ma hadalka Dube baa loo aflagaadaynayaa Reer Shiikh Isxaaq, runta xamar lagama jecla kkkkk,
Habro la soo ururiyey oo lacag yar loo qaybiyey baa kuleh caruur baa naga maqan, askarta loo qaaday Eriteria waxaa laga soo ururiyey somaliya oo dhan maxaa xaafadda Kaaraan oo keliya looga qaylinayaa.
Walee reeer aan ogahay dowladnimo lagu Kari waa, somaliyeey balanteenu Waa inaan dib dambe loo dooran criminals ka aad wada garanaysaan ee Caasimadii ka degi la, dahay.
June 10, 2021 - 8:35 pm
Ciidamada 2 ilaa 3 sano tababar ugu maqan Ereteriya ma waxaa la barayaa sida dayaxgacmeed-ka loo duuliyo!kkk
June 10, 2021 - 9:20 pm
ee ii dhaaf Wiilka hadduusan Hawiye
Xagan yuu xagan oo kale
Lkn waxaan la yaabey ma waxaa dhibay
Canaanta Dubbe aan saarey
Mise BUSTA BURCO
mise Dagaalka Habar Yoonis
June 10, 2021 - 9:24 pm
Dube isaaq shaqo kumalaha waa nin shaqo tagay ee duriyada halaga leexdo wixii Somaliland kadhacay waa la ogaa doorasho taasaa layiraahdaa
June 10, 2021 - 10:11 pm
June 10, 2021 - 11:12 pm
walee waad i taqaan
maanta walaahay waa anigaa dhaartaye laba nin oo halkan soo gala waa BAHAL IYO KALSAME dadka waxay ku sheegaan inay magaca soo badashaan maanta waan qaatay inay caadadooda tahay waxay yihiin bay qoodha moodayaan
bahaloow intaasoo mar ayaan hadal kaala tudhay qoraalkaagana maba akhriyo because waxaad ku hadaaqdaa hawiyaa kana hawiyaa kaasaa kumana caayaan aadbay kuugu dulqaateen nin jilicsan baad tahay hadaad reero caydo adna kanaad sheegatid ee walaalahay samaroon ayaa la caayayaa
buufiskii kalsame ayaad qaaday
daaroodka aadu niikinaysidna walaadan wax uga aqoon saa saaba umaaad raxlayseen
edeb yeelo reerkan hawiyana ka hadh
June 10, 2021 - 11:25 pm
maalintii dhawayd waa anigii kuu sheegayey tigray gate storry wali faro kama qodnaa aarmaajo haduu bad siigalay markuu completely dafiray inaan hal askari la gayn tigray
in the very near future ayaa la soo bandhigayaa magacyada iyo dhaawaca inamadii lagu khamaaray dhiigooda
golahan wax danbe kuma soo qorayo haday beenawdo
by the way mr geed inamuu odhan wax baa la caabudaa wuxuu ina yidhi wixiina meesha soo galaba mid walba chip reereed baa ku jira raganimadu badheedhkay ku jirtaa
June 11, 2021 - 1:47 am
meeshan anigu dabshid ban u nacay waa wax nacayb iyo qabil ka buuxo oo if iyo akhiraba seegay,cawaan nimo way dhaaftay xoolonimo way dhaafta walaahi waxan ku tilmaamo ma garankaro qofkan dabshid sita subxanalah jaahil abu jaahil waa in la fahan siiya in muqdisho tahay caasimada somaliwayn cidna uuna ka xigin goofka uu sheegayo hala aado galmudug halkaas oo waliba lala dago goof u gaar ah haka samaysto,, muqdisho wiilka hargaysa ka yimid baa leh wiilwalba oo somaliyed baa leh 3 million oo somali ah baa dagan oo cashuurta dalka bixiya, markaa hawiyeh waa la idinla yaaban yahay maaha hawiyeh oo dhan ,xoolaha kan dabshide sita u horeeyo xasan sheekh iyo dhowr cawaan oo kale hadiii hawiyeh laga qaban waayo walaahi meel dheer baa laga raadin,muqdisho oo la wada leeyahay baa la idinka tagay waad ku xaarteen ilaa xadhkihii laydhka baad dhulka hoostiisa kala soo baxdeen waad isla dhimateen islaan duqa dhaafi waydeen gabadh iyo wiilba waa idinka baxsan waayey waxad dishiin waxad kufsatiin waxad dhacdiin subxaan markii aduunki idinka yaabay baa somali idin soo noqotay oo la yiri bal hadana aan casimadii xaadhxaadhno,markii la dhisay ee wax dowlad u eg laga dhisayna, idinka la idinka fadhi laayahay hawiyeh isla yaaba xishooda oo is qabta hadii kale or else bay galadu yiraahdan halkii xilka lahayd baad ku noqon doonttiin somali way diin kala tagi doonta..
June 11, 2021 - 2:27 am
horta agoontii kacaankoow isma qabataan miyaa intan oo qof ayaad maalin walba kula hadashaan dabshid aad waxaad doontaa ku tidhaahdaan ma arag isagoo caytamaya,dadku marka aanay isla yaabin ayey wax is fahansiiyaan dabshid iyo idinka waxa idiin dhaxeeyaa waa wax aad u yar qabyaalada aad qarsanaysaan marna idinkoon is ogayn ku hadaaqaysaan ayuu qaawiyey
qofna ha dhaleecayn fekerkiisa hadaad diido tus waxaad ku qancisid
if someone can’t see your perspective, don’t bend their neck
June 11, 2021 - 5:26 am
Jeegaantii miyaa meeshan igu xamanaysa?…
Waar Ilaah ka baqa oo ka daaya dadka Muslimiinta ah isku dirka…
Adeer Soomaali waa hal qoys waana qawmiyad aan sina oo kala tagi karin, riyo maalmeedka ka toos oo naftaada bar in ay beenta iyo khiyaaliga ka harto…
-Ha biqlayso iyo Heego Jeegan waa wada mooryaan, waa intii dal iyo dibedba laga nacay oo is bahaysi samaystay… Waxayna u shaqeeyaan Tplf, una fuliyaan hawlaha isku dirka Soomaalida…..
June 11, 2021 - 8:05 am
Dabshid rag waxaa ugu liita calooshiis la cayaar iyo ciil kama baxe,goormaad ciil iyo cuqdad ka baxeysaa? War cid ku ciishay garan meynee meesha niicda kala bax niicle yahaw.
Markaad leedahay Bahal daarood wax Kama taqaanid maxaad ka wadaa, adiguba sowdiga Hawiye oo xaalkiisa ilaahay uun og yahay aad 24 hrs u nacamlaynayso ma la odhankaraa Adigu qudhaada yaan Hawiye wax ka aqoon because dameerihiinu ma wada daaqaan, bal maanta golaha u sheeg sababta aad u dhex boodayso dagaalka u dhexeeya Daarood iyo Hawiye aan ka ahayn nacayb daarood, sow maaha. you both have same sickness,
Talo kaahinow meesha siyaasadi ma taal oo adigaaba cadeeyey oo u diidan Bahal ra yigiisa, sheegayna inaad Daarood diidan tahay Hawiye ma raacsan tahay sow maaha. Walaadan inta aduunku taagan yahay cid Daarood kuu dhaanta u helayne waxooga bahasha naga badhax. Hadii kale dowladaa laguu sheegi kkkkkk
Guuuul soomaali weyn..
June 11, 2021 - 10:07 am
Abti marka hore salaan ereygaana xaal ka bixi daarood baad necebtahay
Ta labaad dadku waxaanay fahansanayn waxan loo xiiqay waar nimanyoow kalsooni iska yara baadha siyaasad baa laysku hayaaye qabiil layskuma hayo siyaasudana abti iyo adeer iyo saaxiib ma taqaan ee dad joogta ah bay taqaan
Anaga somaliland ahaan cidii aarmaajo kasoo horjeesataa waa saaxiibkayo inta dan tan aan leenahay joogtana cidna loo joojin maayo hadii taleviv isreal nala gasho waanu Tagi